SHAQOOYINKA KA BANNAAN KOMISHANKA DOORASHOOYINKA QARANKA
JAGADA: GUDDOOMIYE (XAFIISKA KOMISHANKA EE HEER GOBOL)
Jagadan qofka loo rabo waa:
In uu noqdo maareeyaha xafiiska doorashooyinka ee heer gobol
In uu agaasimo hawl-maalmeedka shaqo ee xafiiska doorashooyinka gobolka
In uu wadashaqeyn dhow la yeesho xafiisyada doorashooyinka heer degmo
In uu ka qeyb-qaato qiimeynta xaaladda goobaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta
In uu ka caawi komishanka qabanqaabada goobaha lagu tababarayo shaqaalaha diiwaangelinta/doorashada
In uu hubiyo in warbixinta xisaabeedka ku saabsan xisaabcelinta maaliyadeed loo diro xarunta dhexe ee KDQ.
In uu diyaaro warbixin bil-leh ah iyo mid joogto ah oo la xidhiidha hawlaha xafiiska doorashada heer gobolka
In uu wadashaqeyn dhaw la yeesho wakiillada axsaabta qaranka iyo maamulka gobolkaba.
In uu guto waajibaadka iyo masuuliyadaha uu farayo xeerka doorashooyinka (Xeer Lr. 20/2001)
In uu guto wixii hawlo shaqo ee ay u igmadaan guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranku.
Shahaadada iyo Khibrada laga rabo
In uu haysto shahaado heerka koowaad ee jaamacadeed ama diblooma la xidhiidha maamulka iyo maareynta ama wax u dhigma
In uu leeyahay ugu yaraan khibrad 5 sanno ah oo la xidhiidha maamulka iyo maareynta
In ay ka go’an tahay in uu noqdo xubin shaqaale oo firfircoon
In uu awood u leeyahay in uu la tacaalo culeysyada waqti iyo shaqo
Waa in uu qofko yeesho kartiyo dheeraad ah, sida: dhexdhexaadiye, degdeg wax ku fahmi kara isla markaana leh xirfad hoggaaminnimo
In uu aqoon fiican u leeyahay luqada Ingiriisiga
In da’diisu ka weyntahay 36 jir.
Waa in aanuu ahayn shaqaale dawladeed ama xubin firfircoon oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed.
Dhamman codsadayaasha shaqooyinkan waa in aay codsiyadooda oo ka kooban ;- CV & Cover letter – ku soo diraan E-mail-kan ( slnechumanr@gmail.com ). Qaybta subject – Emailka waa in codsade kasta ku soo qoraa – Shaqada iyo Gobolka/Degmada uu codsanaayo.
Wakhtiga ugu danbeeya ee la soo gudbin karo codsiyadu waa: 3da September 2020 – Dhamman codsiyada ka habsaama wakhtigaas lama aqbali doono.
KDQ wuxu la soo xidhiidhi doona oo kaliya codsadayaasha ku soo baxa – liistada gaaban (short list).
JAGADA: XOGHAYE (XAFIISKA KOMISHANKA EE HEER GOBOL)
In uu masuul ka noqdo maamulka xafiiska doorashada ee gobolka
In uu si dhaw ula shaqeeyo agaasimaha xisaabaadka ee KDQ si loo hubiyo waqtiga ugu fiican ee la heli karo lacagaha doorashooyinka ee heer gobol.
In uu hubiyo in habraacyada maaliyadeed si wanaagsan loo raacay
In uu diyaaro xisaabxidhka bil-laha ah isla markaana u gudbiyo xarunta dhexe xilliga loo asteeyay
In uu masuul ka noqdo lacagaha yaryar (petty cash) ee xafiiska loo isticmaalo
In uu dejiyo isla markaana hayo alaabta loo baahan yahay ee ah qalabyada, agabka la isticmaalo iyo sahayda.
In uu guto wixii hawlo shaqo ee la xidhiidha shaqooyinka sare ee uu igmado guddoomiyaha doorashada ee gobolku.
In uu leeyahay ugu yaraan khibrad 2 sanno ah oo la xidhiidha maamulka
In uu leeyahay khibrad aqooneed ku saabsan xidhiidhka iyo qorista warbiximaha (report writing)
Inuu aqoon fiican u leeyahay Kumbuyuutarka kuna shaqaynkaro dhamaan culuumta kombuyuutarka ee shaqada la xidhiidha.
In uu awood u leeyahay in uu qori karo hadal-qoraallada shirarka iyo kulamada.
JAGADA: GUDDOOMIYE XIGEEN (XAFIISKA KOMISHANKA EE HEER GOBOL)
In uu ka caawiyo guddoomiyaha hubinta in xafiiska doorashooyinku u shaqaynayo si habsami ah isla markaana dhamaan hawlaha la gutay xilligii u asteysnaa.
In uu ka caawiyo guddoomiyaha fulinta hawl-maalmeedka shaqo ee xafiiska doorashooyinka gobolka
In uu leeyahay ugu yaraan khibrad 2 sanno ah oo la xidhiidha maamulka iyo maareynta
JAGADA: GUDDOOMIYE (XAFIISKA KOMISHANKA EE HEER DEGMO)
In uu noqdo maareeyaha xafiiska doorashooyinka ee heer degmo
In uu agaasimo hawl-maalmeedka shaqo ee xafiiska doorashooyinka heer degmo
In uu wadashaqeyn dhow la yeesho xafiisyada doorashooyinka heer gobol
JAGADA: XOGHAYE (XAFIISKA KOMISHANKA EE HEER DEGMO)
In uu masuul ka noqdo maamulka xafiiska doorashada ee degmada
In uu guto wixii hawlo shaqo ee la xidhiidha shaqooyinka sare ee uu igmado guddoomiyaha doorashada ee degmadu.
In uu haysto shahaado diblooma ah ama dhamaystay dugsiga sare
In uu leeyahay khibrad shaqo
In uu leeyahay khibrad maamul oo adag
JAGADA: GUDDOOMIYE XIGEEN (XAFIISKA KOMISHANKA EE HEER DEGMO)
In uu ka caawiyo guddoomiyaha fulinta hawl-maalmeedka shaqo ee xafiiska doorashooyinka degmada